Its Travel, Tourism & Tech Blog: इन्टरनेट पहुँचमा उच्च वृद्धि
इन्टरनेट पहुँचमा उच्च वृद्धि
काठमाडौं, ९ फागुन । एक वर्षको अवधिमा साढे १७ लाखभन्दा बढी इन्टरनेट उपभोक्ता थपिएका छन् । दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार गएको दुई–तीन वर्षमा इन्टरनेट सेवा प्रयोगकर्ता ह्वात्तै बढेका हुन् ।
पछिल्लो समय पुरानो प्रविधिमा आधारित इन्टरनेट प्रयोगकर्ता घटिरहेका छन् भने नयाँ प्रविधिमा आधारित ब्रोडब्यान्ड र वाइफाईमा आधारित उपभोक्ताको वृद्धि भइरहेको छ । इन्टरनेट उपभोक्ताको वृद्धिदर ६ दशमलव ७७ प्रतिशत पुगेको छ । प्राधिकरणको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार अहिले कुल जनसंख्याको २१ दशमलव ५० प्रतिशतले इन्टरनेट प्रयोग गर्छन् । विभिन्न प्रविधिको इन्टरनेट प्रयोग गर्ने उपभोक्ताको संख्या ५६ लाख ९३ हजार नौ सय १३ पुगेको छ ।
सहज उपलब्धता र विभिन्न प्रकारको सेवा उपलब्ध भएकाले बर्सेनि तीव्र गतिमा इन्टरनेट सेवा प्रयोग गर्ने उपभोक्ता बढिरहेका छन् । पछिल्लो समय वाइफाई इन्टरनेट उपलब्ध गराउने कम्पनीको संख्या बढेको छ । विभिन्न कम्पनीले सस्तो दरमा तीव्र गतिको इन्टरनेट दिने दाबी गर्दै अफर ल्याएका छन् । वेबसर्फर नेपाल कम्युनिकेसनले रात्रि प्याकेज तथा आवरली बेस प्याकेज लिने ग्राहकका लागि एक वर्षको सेवा लिँदा जडान खर्च नलिने बताएको छ । कम्पनीले मासिक चार सय ९५ रुपियाँमा अनलिमिटेड सेवा दिने जनाएको छ । वेबसर्फरका बिक्री प्रबन्धक सन्दीप शर्माका अनुसार अनलिमिटेड प्याकेज लिने ग्राहकले ६ महिनाको सेवा लिँदा जडान खर्च शतप्रतिशत र आठ जिबीको पेनड्राइभ पाउनेछन् । कम्पनीले सेयरिङ रेसियोका आधारमा अनलिमिटेड, भोल्युम बेस प्याकेज तथा आवरली बेस र रात्रि प्याकेज उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।
अर्को सेवा प्रदायक क्लासिकटेक प्रालिले ‘सिटी ४५ फाइबर टु योर होम’ नामक योजना ल्याएको छ । एक हजार पाँच सय रुपियाँमा १५ एमबिपिएस गतिको इन्टरनेट उपलब्ध गराउने कम्पनीले बताएको छ । त्यसैगरी सुविसु केबलनेट प्रालिले दोब्बर गतिमा इन्टरनेट सेवा चलाउन सकिने ‘डबल ब्यान्डविथ अफर’ ल्याएको छ । दुई सय ५६ किलोबाइट प्रतिसेकेन्डको इन्टरनेट सेवा लिने ग्राहकले पाँच सय १२ किलोबाइट प्रतिसेकेन्ड चलाउन सकिने कम्पनीले जनाएको छ ।
इन्टरनेट सेवा प्रदायकबीचको बढ्दो प्रतिस्पर्धाले ग्राहकलाई भने फाइदा पुर्‍याएको छ । प्रतिस्पर्धाले गर्दा कम्पनी सस्तोमा इन्टरनेट प्रदान गर्न आक्रामक रूपमा उत्रेका छन् । यसले ग्राहकको संख्या बढाउन पनि भूमिका खेलेको छ । प्राधिकरणका अनुसार अहिलेसम्म मुलुकभर ४२ कम्पनीले इन्टरनेट सेवा चलाउने अनुमति पाएका छन् । यसैगरी ६ वटा कम्पनीले ग्रामीण क्षेत्रमा इन्टरनेट चलाउने अनुमति लिएका छन् ।
प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार मोबाइलमै र मोबाइल एवं डाटा कार्डमार्फत प्रयोग गर्न मिल्ने जिपिआरएस, इजिजिई, डब्लुसिडिएमए र इभिडियो जस्ता सेवा प्रयोग गर्ने उपभोक्ता सबैभन्दा बढी छन् । सहज उपलब्धता र सस्तो भएका कारण यस्ता उपभोक्ता बढिरहेका छन् । जिपिआरएस, इजिजिइ र डब्लुसिडिएमएका ग्राहक मात्रै ५२ लाख ८५ हजार छन् ।
पछिल्ला वर्षमा टेलिफोनमा आधारित सेवा विस्तार गर्ने दूरसञ्चार कम्पनीसमेत इन्टरनेटमा केन्द्रित बन्दै गएका छन् । ०६५ सालमा नेपाल टेलिकमले फोन र इन्टरनेट एकैपटक प्रयोग गर्न मिल्ने एडिएसएल सेवा सुरु गरेको थियो पहिलोपटक । अहिले टेलिकमले थ्रिजी, इभिडियो, सिडिएमए तथा पछिल्लो पुस्ताको मानिने वाइम्याक्स इन्टरनेट समेत सुरु गरिसकेको छ । हाललाई वाइम्याक्स कर्पोरेट ग्राहकलाई मात्र उपलब्ध छ । सेवा विस्तारका दृष्टिले टेलिकमको इन्टरनेट सेवा लगभग देशभर नै फैलिएको छ । यसको एडिएसएल इन्टरनेट सेवा सबैभन्दा बढी रुचाइएको छ । यसका लागि ल्यान्डलाइन टेलिफोन आवश्यक पर्छ, तर इन्टरनेट प्रयोग गर्दा फोन अबरुद्ध हुँदैन । भोल्युम र मासिक दुवै आधारमा इन्टरनेट सेवा किन्न पाइन्छ । एक सय २८ देखि पाँच सय १२ एमबिपिएस गतिको इन्टरनेट टेलिकमले बेचिरहेको छ । एनसेलले थ्रिजीमार्फत इन्टरनेट सेवा प्रवद्र्धन गरिरहेको छ भने युनाइटेड टेलिकम (युटिएल) ले पनि सिडिएमएमा आधारित बेतारे इन्टरनेट चलाइरहेको छ ।
डेढ दशक अगाडि नेपाल भित्रिएको इन्टरेनट सेवा डायलअप प्रविधिबाट उच्च गतिको ब्रोडब्यान्डसम्म आइपुगेको छ । सन् १९९५ मा मर्कन्टाइल कम्युनिकेसनले डायलअप प्रविधिबाट नेपालमा इन्टरनेट सेवाको थालनी गरेको थियो । अहिले इन्टरनेट सञ्जाल कुनै न कुनै रूपमा देशभर फैलिसकेको छ ।
Posted by Laxmi Prasad Khatiwada at 4:25 PM
RAJESH4489 June 1, 2013 at 3:08 AM
milan June 30, 2013 at 8:27 PM
imandarmedia.com January 16, 2017 at 9:47 PM
Laxmi Prasad Khatiwada
I am Journalist & Writer. Enjoying at Print & Digital Medai
अख्तियारले रनवे बिग्रेको छानबिन गर्ने
नयाँ पत्रिका काठमाडौं, १६ असार व्यवस्थापिका-संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको हेलिप्याड तथा रनवे भत्किए...
पतिपथमा श्रीमति हिलारी
मंगलवार ककनीस्थित पर्वतारोहि स्मृति उद्यानमा नेपाल पर्वतारोहण संघले निर्माण गरेको पतिको स्मृति स्तम्भ अवलोकन गर्दा सर्वोच...
लक्ष्मीप्रसाद खतिवडा काठमाडौं, १३ चैत । विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको उचाइ नेपाल आफैले अहिलेसम्म नापेको छैन । फलस्वरूप पछिल्लो समय अमेर...
आन्तरिक पर्यटकले धानिदै हेलम्बु
नयाँ पत्रिका हेलम्बु, १३ असार कुनै वेला विदेशी पर्यटकबाट हुने आम्दानीले चल्ने हेलम्बुका होटल तथा लज पछिल्लो समयमा आन्तरिक पर्...
राकेश वाधवाको सम्पत्ति लिलामीमा
नया पत्रिका काठमाडौं, १६ असार सरकारले क्यासिनो सञ्चालन गरि रोयल्टी नतिर्ने नेपाल रिक्रिएसन सेन्टरको नाममा रहेको अचल सम्पत्ति लिलाम गरेको छ...
@ Laxmi P Khatiwada. Picture Window theme. Powered by Blogger.